သင်သည်သင်၏သွေးလွှတ်ကြောသန့်ရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကိုစားသင့်ပါတယ် 14 အစားအစာများ - ကျန်းမာရေး PLUS MAG - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အကြံပြုချက်များ သင်သည်သင်၏သွေးလွှတ်ကြောသန့်ရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကိုစားသင့်တယ် "14 အစားအစာများ - ကျန်းမာရေး PLUS MAG
သင်သည်သင်၏သွေးလွှတ်ကြောသန့်ရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကိုစားသင့်ပါတယ် 14 အစားအစာများ - ကျန်းမာရေး PLUS MAG
သင်သည်သင်၏သွေးလွှတ်ကြောသန့်ရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကိုစားသင့်ပါတယ် 14 အစားအစာများ
by: ပက်ထရစ်က F
Published: ဧပြီလ 14 2019
နေ့စွဲနောက်ဆုံး updated: ဧပြီလ 12 2019 ပု
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကအဆိုအရတစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်သေမင်း၏အကြောင်းရင်းမှာဦးဆောင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများနှလုံးနှင့်သွေးကြောထိခိုက်ချို့ယွင်း၏အုပ်စုတစုရှိပါတယ်။ အများအပြားအချက်များထိုကဲ့သို့သောဆေးလိပ်သောက်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု, ဆီးချို, ဒါမှမဟုတ် hyperlipidemia အဖြစ်ဤ၏အသွင်အပြင်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုဆန့်ကျင်စောငျ့ရှောကျဖို့, တကကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့ချမှတ်နှင့်သွေးလွှတ်ကြောများ၏ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်ဟုအစားအစာများကိုမြှင့်တင်ရန်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ဤတွင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ရန်သင့်တဲ့အစားအစာထဲသို့ထည့်သွင်းရန်အစားအစာများ 15 ။
Infarction, လေဖြတ်ခြင်း, သွေးကြော, ဆိုးဝါးနိုင်ပါတယ်ကြောင်းအဖြစ်အများအပြားရောဂါများ။ E-Times သတင်းစာထိုသို့မြှင့်တင်နေဖြင့်ကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရှိသည်ဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်, သူတို့ကိုရှောင်ရှားရန်ကြောင်းကရှင်းပြသည်လေ့ကျင့် နှင့်သွေးလွှတ်ကြောသန့်ရှင်းရေးကူညီအစားအစာများ။ သင်ငါးနှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းသောဖြစ်ကြောင်းသိကြသလား? သင်တို့သည်ဤလိုင်းများကိုဖတ်လျှင်, သင်ကသင့်သွေးကြောကာကွယ်ပေးရန်သင့်တဲ့အစားအစာထဲသို့ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်အရာကိုသိပါလိမ့်မယ်။
၏ Citrus သွေးလွှတ်ကြော unclog ရန်စံပြအစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့လက်စထရောများစုပ်ယူမှု pectins နှင့်အရှင်လုပ်ကွက်နှင့်ပြည့်ဝ၏။ ဤအညီ လေ့လာလိမ္မော်သီးဖျော်ရည်၏မကြာခဏစားသုံးမှုမှာသွန်းသောအသွေးထဲမှာလက်စထရောများတဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာလျှော့ချပေးသည်။
သစ်သီးသစ်ရွက်အထူးသဖြင့်, ထိုသွေးလွှတ်ကြောရှင်းလင်းဖို့အကြံပြု ဂေါ်ဖီထုပ် curly ။ အိုမီဂါ 3, antioxidants များနှင့်အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝ, ဒီအစားအစာကိုသွေးလွှတ်ကြောရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖွယ်ရှိလူများကပိုမိုနှစ်သက်ရပါမည်။
ဗီတာမင် A နဲ့ C ကြွယ်ဝဟင်းနုနွယ်ရွက် beta ကို carotene ၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သတင်းရပ်ကွက်များဖြစ်ကြသည်။ ဤအညီ လေ့လာဤသည်အစားအစာသွေးလွှတ်ကြောများ၏တောင့်တင်းဆန့်ကျင်သည်အလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်အရသာအသီးသွေးကြော unclogging အတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ အက်ဆစ်ကြွယ်ဝသော Punic နှင့် antioxidants သည်သွေးလွှတ်ကြောအတွင်း၌ဖွဲ့စည်းထံမှပန်းကန်ကာကွယ်ပေးသည်။ ဤသူကား သိပ္ပံနည်းကျ သက်သေပြချက်: ၎င်း၏စားသုံးမှုအားလုံးနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ကူညီပေးသည်။
ဤရွေ့ကားမျိုးစပါးသွေးကြောများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်မှစံပြဖြစ်ကြသည်။ ဤအညီ လေ့လာသူတို့ဓါတ်တိုးခြင်းနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်၏ဒိုင်းလွှားအဖြစ် Anti-inflammatory ပြုမူ။
အများအပြားသီလများအတွက်မသိ, ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်းပြားနှင့်သွေးဖိအားကိုလျှော့ချအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ အတိုင်း သုတေသီများအစားအစာသွေးကြောများ၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချမှုအတွက်အသုံးဝင်သည်။
၎င်း၏အမြင့်ဆုံးကိုကိုးနဲ့ flavonoids မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, အ chocolat Black ကအောင်ကူညီပေးသည် သွေးလွှတ်ကြော နှလုံးရောဂါတားဆီးနိုင်အောင်ပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်။ တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့စတုရန်းလေးထောင့တစ်ရက်ခြုံငုံကျန်းမာရေးအပေါ်အကျိုးခံစားခွင့်ကိုခံစားရန်အကြံပြုသည်။
ယင်း၏အစွမ်းထက် antioxidant ဂုဏ်သတ္တိနှင့်အတူသံပုရာသည့်သွေးလွှတ်ကြောနှင့်နှလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးအဘို့ကြီးသောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါCitrus အရှင်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်သွေးထဲမှာလက်စထရောအဆင့်ကိုလျှော့ချလည်းဗီတာမင် C ကြွယ်ဝနေသည်။
ရွှေအမွှေးအကြိုင်ဆန့်ကျင်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ် သွေးကြော နှင့်သွေးထဲမှာအနိမ့်လက်စထရောအဆင့်ကိုရန်။ polyphenols ကြွယ်ဝကသွေးလွှတ်ကြောများနှင့်ခြုံငုံနှလုံးသွေးကြောစနစ်ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။
အိုမီဂါ3နှင့်ဖက်တီးအက်ဆစ်ကြွယ်ဝ, ငါးနှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်အများဆုံးထောက်ခံအုကူံပငါးဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကကောင်းသောလက်စထရောများအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဤအညီ လေ့လာ, ငါးသေတ္တာနှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။
မဂ္ဂနီဆီယမ်, ပိုတက်စီယမ်နှင့်ပရိုတိန်းမှာသူတို့ရဲ့ကြွယ်ဝသောနှင့်အတူ, ပဲဟင်းကတော့သွေးလွှတ်ကြော၌ဤပြားလျော့ချကူညီပေးသည်။ ဤသူကား သိပ္ပံနည်းကျ သက်သေပြ: ဆီထွက်သီးနှံများ၏စားသုံးမှုစိတျနှလုံးအဘို့အကြံပြုသည်။
သူတို့ရဲ့ဓါတ်တိုးဖို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်, ပျားရည်သွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဘို့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အတိုင်း သုတေသီများသူတို့ကအများဆုံးတာဝန်ရှိသည် hyperlipidemia လဲကျ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ.
citrulline တစ်ခုအမိုင်နိုအက်ဆစ်ကြွယ်ဝ, ဖရဲသီးရောင်ရမ်းပြုမူဆက်ဆံခြင်းနှင့်သွေးလွှတ်ကြောစင်ကြယ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဤ အသီး ထို့အပြင်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်, သွေးဖိအားကိုလျော့နည်းစေတယ်လေတစ်ခုဒြပ်စင်ကြွယ်ဝနေသည်။
blueberries သူတို့ရဲ့ဓါတ်တိုးအရေးယူဘို့တန်ဖိုးကြီးလျက်ရှိသည်။ သူတို့ကသွေးကြောများ၏တာဝန်ခံပန်းကန်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်တာဝန်ရှိသည်အခမဲ့အစွန်းရောက်ဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ.
သင့်ရဲ့အစားအသောက်သို့, ဤအစားအစာများကိုမိတ်ဆက်မပြုမီ, ကအထူးကုတိုင်ပင်ဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
ပြန်လည်စုစည်းမှုရန်, သံပုရာဟာသည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောရောဂါ, ကျောက်ကပ်ပြဿနာများနှင့်အစာအိမ်ရောဂါများနှင့်အတူလူတို့အဘို့အကြံပြုသည်မဟုတ်။
ကျန်းမာရေး PLUS MAG - ထိုရာသီခွင်၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုသဟဇာတစုံတွဲများဖြစ်